Dukumiintiyada taariikhiga ah, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Caqiido (Credo, oo ka soo jeeda Latin “Waan rumeysanahay”) waa soo-koobitaanka aamminsanaanta. Waxay dooneysaa inay liis garato runta muhiimka ah, cadeyso hadalada barida, runta ka sooc qaladka. Waxaa badanaa loo keydiyaa si si fudud loogu xasuusto. Dhowr meelood oo Kitaabka Quduuska ahi waxay leeyihiin dabeecad caqiido. Marka Ciise wuxuu u adeegsaday qorshaha ku saleysan Sharciga Kunoqoshadiisa 5: 6,4-9. Bawlos wuxuu sameeyay oraah fudud, sumcad-u eg 1 Korintos 8,6: 12,3; 15,3 iyo 4-1. 3,16 Timoteyos sidoo kale wuxuu bixiyaa caqiidad qaab si toos ah loo fahmay.
Fiditaankii kaniisaddii hore, waxaa loo baahnaa caqiido rasmi ah oo tusaysa rumaystayaasha cilmiga ugu muhiimsan ee diintooda. Caqiidada Rasuullada waxaa loo yaqaanaa, ma aha sababta oo ah rasuulladii ugu horreysay ayaa u qoray, laakiin sababtoo ah waxay si kooban u soo koobeysaa waxbarista rasuullada. Aabayaasha kiniisadda ee Tertullian, Augustine iyo kuwa kaleba waxay lahaayeen noocyo ka yara duwan oo ka mid ah Caqiidooyinka Rasuulladu; Qoraalka Pirminus ugu dambeyntii wuxuu noqday qaabka caadiga ah (qiyaastii 750) la qaatay.
Sidii Kaniisaddu u kortay, sidaas oo kale faasiqnimada, iyo Masiixiyiintii hore waxay ahayd inay caddeeyaan halka xadka iimaankoodu jiifay. Horraantii qarnigii 4aad, ka hor intaan la aasaasin kitaabka Axdiga Cusub, waxaa bilaabmay muran ku saabsan ilaahnimadiisa Masiixu. Codsiga Emperor Constantine, 325 wadaad ah oo ka kala yimid dhammaan qeybaha Boqortooyada Roomaanka ayaa isugu yimid Nicea si ay u caddeeyaan su’aashan. Waxay ku qoreen is-afgaradkooda waxa loogu yeero Caqiidada Nicea. Sidood kale wuxuu ku kulmay Konstantinople 381, kaasoo qirashada Nicene waxyar dib loo eegay oo lagu balaariyay dhowr qodob. Noocaani waxaa loo yaqaanaa 'Nicene Constantinopolitan' ama Xikmadda 'Nicene Creed' muddo gaaban.
Qarnigii dambe, hogaamiyaasha kaniisadaha waxay ku kulmeen magaalada Chalcedon si ay ugala taliyaan, iyo waxyaabo kale, oo ku saabsan dabeecadda Eebbe iyo ninka. Waxay heleen qaacido ay rumeysan yihiin inuu waafaqsan yahay injiilka, caqiidada rasuullada, iyo kitaabka. Waxaa lagu magacaabaa qeexitaanka Masiixi ahaaneed ee Chalcedony ama qaaciidada Chalcedonian
Nasiib darrose, caqiidooyinku sidoo kale waxay noqon karaan qaab, qaab adag, aan caadi ahayn, oo mararka qaar la mid ah "Qorniinka Quduuska ah." Markii si sax ah loo isticmaalo, hase yeeshe, waxay bixiyaan aasaaska aasaasiga ah ee waxbarista, ilaaliya caqiidada kitaabiga ah ee saxda ah waxayna abuuraan diirada nolosha kaniisadda. Saddexda caqiido ee soosocda waxaa si weyn looga wada dhex aqoonsaday Masiixiyiinta sidii kitaabiga ah iyo sida sameynta orthodoxy-ka dhabta ah ee Masiixiga (orthodoxy).
Caqiidada 'Nicene' (AD 381)
Waxaan aaminsanahay Ilaaha ah Aabbaha Qaadirka ah, abuuraha samada iyo dhulka, wax kasta oo la arki karo oo aan la arki karin. Iyo xagga Rabbi Ciise Masiix, oo ah Wiilka keliya ee Ilaah ee dhashay, oo uu Aabbaha ka dhashay weligiis, iftiinka nalka ka yimid, Ilaaha runta ah ee Ilaaha runta ah, oo la dhashay, oo aan la uumay, isagoo leh Aabbaha, kan wax walba ku sameeyey xaggiisa, oo binu-aadmiga ah iyo badbaadadeenna ayaa samada ka soo degtay oo waxaynu ka helnay hilibka Ruuxa Quduuska ah iyo Maryan oo bikrad ah iyo nin, oo iskutallaabta laygu qodbay, oo ka hoos jirtay Bontiyos Bilaatos oo ku silcay oo la aasay oo maalintii saddexaad sara kacay sida Qorniinku leeyahay oo samada iyo dib u socday. Gacanta midig ee aabbahay baa fadhiisanaya oo sharaftiisa u soo noqon doona oo u xukumi doona kuwa nool iyo kuwa dhintay boqortooyadooda aan dhammaad lahayn.
Iyo Ruuxa Quduuska ah, Rabbiga iyo nolosha bixiya, oo xagga Aabbaha ka soo baxa, oo isaga la caabudo oo la ammaano isaga iyo Aabbaha iyo Wiilku, kuwaas oo ka sii sheega nebiyadii
leeyahay; ilaa kaniisad qoduus ah oo kaatoolig ah iyo dhammaanteed iyo kaniisadda Rasuul. Waxaan qiraynaa baabtiis si loo cafiyo dembiyada; Waxaan sugeynaa sarakicidda kuwii dhintay iyo nolosha mustaqbalka. Aamiin.
(Waxaa laga soo xigtay JND Kelly, Old Confession Christian, Göttingen 1993)
Caqiidada rasuullada (qiyaastii 700 AD)
Waxaan aaminsanahay Ilaaha ah Aabbaha Qaadirka ah, Abuuraha Cirka iyo Dhulka. Iyo Ciise Masiix, oo ah wiilkeenna keliya oo dhashay, oo ah Sayidkeenna, oo ku helay Ruuxa Quduuska ah, oo ku dhashay Maryan oo bikrad ah, oo uu silcsiyo Pontius Bilaatos, iskutallaabta lagu qodbay, oo dhintay oo la aasay, oo galay boqortooyada dhimashada, oo maalintii saddexaad ka soo sara kacay, Oo markuu cirka u baxay, wuxuu fadhiyaa midigta Ilaaha Aabbaha ah; oo wuxuu ka imaan doonaa inuu xukumo kuwa nool iyo kuwa dhintayba. Waxaan aaminsanahay Ruuxa Quduuska ah, Kaniisadda Masiixiga ee quduuska ah, wadaagga quduusiinta, cafiska dembiyada, sarakicidda kuwii dhintay, iyo nolosha weligeed ah. Aamiin.
Qeexitaanka midnimada Ilaah iyo dabeecadda aadanaha ee qofka Masiixa
(Golaha Chalcedon, 451 AD)
Markaa, anagoo raacaya aabayaasha quduuska ah, dhammaanteen waxaan si wada jir ah wax u barinnaa inay qirtaan Rabbigeenna Ciise Masiix inuu yahay wiil isku wiil ah. waa isku qumman yahay ilaahnimadu waa islaam aadamiguna waa islaam, waa isku ilaahay runti runtiina ninku wuxuu kayahay nafta caqliga iyo jirka, aabuhuna (homooúsion) ilaahnimadu iyo inaynu isku mid nahay sida aadanaha oo kale, si kasta oo inaga mid ah ayaynu dembi u ahayn. Wuxuu ku dhashay ilaahnimadii kahor aabihii, laakiin dhamaadka wakhtiyada, si la mid ah, aawadood Maryan iyo badbaadadeenna oo laga helay Maryantii bikradda ahayd iyo Hooyadii Ilaah (theotokos) [wuxuu dhashay], waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay isku mid, Masiix, Wiil, Dhalad, aan la beddelin, aan la beddelin, aan loo kala qaybin laba dabeecadood. Kala duwanaanshaha dabeecadaha sinaba looma burin karo ujeedka midnimada; taa beddelkeeda, sida ay u kala duwan yihiin labada dabeecadoodba waa la ilaaliyaa oo waxay ku xidhan tahay qof iyo hypostasis. [Waan qiraynaa] mana ahan sidii laba qof oo loo kala qaybiyey, laakiin sidii wiil iyo isku wiil, Eebbe, Logos, Sayidow, Ciise Masiix, sidii nebiyada [wax looga sii sheegay] isaga iyo isaga, Ciise Masiix ayaa na baray oo Aabaha astaamaha ah (Creed of Nicea] ayaa naloo soo diray. (Waxa laga soo qaatay diin hore iyo wixii hadda ka dambeeya, oo ay daabacday Betz / Browning / Janowski / Jüngel, Tübingen 1999)
Dukumiintiyada taariikhiga ah ee kaniisadda masiixiga